Nezvedu - Hebei Veyong Pharmaceutical Co., Ltd.
Kuchave neakajeka uye rakakura ramangwana neVeyong!
Hebei Veyong Pharmaceutical Co, Ltd.i hombe chipfuyo mishonga yezvipfuyo inosanganisa iyo R&D, kugadzirwa uye kutengesa kwevezvipfuyo APIs, gadziriro, maficha ekumberi uye zvekuwedzera zvekudya, zvinopihwa seHigh-Tech Enterprise, Wepamusoro 10 weVeterinary APIs Enterprise. Veyong anoteera zano rekuvandudza re "Kubatanidzwa kweAPI & gadziriro", inotora "Chengetedza hutano hwemhuka uye nekuvandudza hupenyu hwehupenyu" senhume, uye inovavarira kuve inonyanya kukosha mishonga yezvipfuyo.
Mabhesi maviri Ekugadzira
Shijiazhuang uye Ordos
7 API Mitsara Yekugadzira
Kusanganisira Ivermectin, Eprinomectin, Tiamulin Fumarate, Oxytetracycline hydrochloride ects
Kugadzirira Kugadzira Lines
Kusanganisira jekiseni, mhinduro yemumuromo, upfu, premix, bolus, mishonga yezvipembenene uye disinfectant, ects
2 mitsara yekuchenesa disinfectant yekugadzira
2 sanitary disinfectant yekugadzira mitsara yezvinwiwa uye neupfu.
Sarudzo uye Kubudirira
Veyong anonamatira kuchiratidzo chekambani "simbisa chinzvimbo chehutungamiriri chezvigadzirwa zvechimbichimbi, uye kuzadzisa marangi anotungamira ezvigadzirwa zvematumbo uye nzira yekufema". Iyo inotungamira chigadzirwa, Ivermectin, yapasa iyo US FDA chitupa, EU COS chitupa uye chakatora chikamu mukuvandudzwa kweEU zviyero, kutora nezve 60% yemugove wepasi rose wemusika. Iyo yenyika Kirasi II nyowani yemhuka yezvinodhaka, Eprinomectin, inotora ingangoita 80% yemugove wese wemusika. Uye Tiamulin fumarate inosangana neiyo USP standard. Kuvimba nezvigadzirwa zveAPI uye zvigadzirwa zvehunyanzvi, zvigadzirwa zvishanu zvekugadzirira zvakagadzirwa. Mhando dzinotungamira dzekupwanya - Weiyuan Jinyiwei; iyo inotungamira mhando yemiti yakakosha oiri uye zvakasarudzika zvigadzirwa zvekurwisa mabhakitiriya - ALLIKE; epamusoro zvigadzirwa zvigadzirwa zvekudzivirira uye kurapwa kwezvirwere zvekufema uye ileitis - Miao Li Su; iyo yenyika Kirasi II nyowani wezvokurapa zvinodhaka - Ai Pu Li; uye iyo brand ye demildew uye detoxification zvigadzirwa- Jie San Du. Pasi pekuitwa kwemutemo weantibhakitiriya muganho uye kurambidzwa uye nekuenderera kwesimba kwe Africa swine fever, Veyong inopa mhinduro yakazara yemapurazi emhuri nevatengi veboka.
Veyong inonamatira kune "Musika-Yakatarisana uye Yevatengi-Yakavakirwa" bhizinesi pfungwa, inogadzira nzira dzekutengesa dzinofukidza vashandisi vekupedzisira uye tekinoroji timu ine hupfumi ruzivo rwekuongororwa uye kurapwa, inochengetedza kwenguva refu-kudyidzana hukama neakakura epamba mapoka ekuberekesa, mabhizinesi ane akabatanidzwa maindasitiri. cheni uye mazhinji emakambani ane mukurumbira ehutano hwemhuka, nezvigadzirwa zvinotengeswa kune dzinopfuura nyika makumi matanhatu nenharaunda. Gadzira nzira yekushambadzira, kuenderera mberi uchipa zvigadzirwa zvizere uye masevhisi evanoshanda navo maererano nezvechigadzirwa, inonzwisisika inoenda kumabhizinesi akavezwa, akajeka uye epuratifomu, uye inosimudzira kuvandudza kwakabatana kweindasitiri.
Veyong inonamira kukoshesa kukuru kune manejimendi chengetedzo uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, inosimbirira kune yepazasi-mutsara kufunga kwe "chengetedzo mutsvuku mutsetse, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza ndeyekufungidzira, kutevedza chivimbiso", uye nekuenderera mberi kuchisimudzira kuvakwa kwekuchengetedzeka uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza manejimendi sisitimu, inosimbisa yakazara-maitiro ekudzivirira mashandiro anoenderana nenjodzi, inowedzera mari mukuchengetedza uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, uye inovimbisa kushanda kwakagadzikana uye kusimudzira kwenguva refu kweKambani.
Ichitevera pfungwa yemusika ye "kutungamira ramangwana, kukosha-kwakawedzera masevhisi uye kuhwina-kuhwina kubatana", chirongwa chebudiriro chehurongwa chekuvaka chikuva chesimba chiri kuratidzwa.